Muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya nooca dhigga qofka iyo u adkeysiga gaajada? | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya nooca dhigga qofka iyo u adkeysiga gaajada?
Soonka bisha Ramadhaan oo laga helo caafimaad aad u badan hadana dad badan waxay dhibaato kala kulmaan isbeddelka ku imanaya habkii hore ee ay wax u cuni jireen ama ay u cabbi jireen taasoo mararka qaar ay la soo dersito daal iyo tabardarroo aad u badan dadka qaba cudurrada macaanka iyo dhiig karkana ay dhibaatooyin caafimaad darro ay kala kulmaan.
Haaddaba qormadan kooban ayaa waxaan isku dayeynaa inaan akhristayaasha kula wadaagno talooyin wanaagsan oo la xiriira afurka iyo suxuurta caafimaadka ugu wanaagsan ee loo baahan yahay in la raaco.
BBC Carabi waxay la hadashay dad badan oo muslimiinta sooman ka mid ah waxayna wax ka weydiisay qorshahooda ku aadan bisha ramadhaan ee la xiriira cunnooyinka ay isticmaalayaan inta bisha soonka lagu guda jiro iyada oo u sii kala qaadeyso jinsi iyo qoys.
Nooca dhigga qofka uu yahayna sida oo kale wuxuu xiriir la leeyahay qofka sida uu dulqaad iyo samir uu ugu yeelan karo gaajada maalinta dhan uu sooman yahay.
Cuntooyin kala duwan oo diyaar ah
Suxuurta maxaa u wanaagsan maxaanse u wanaagsaneen?
Qofka Sooman waxa uu ku suxuurto ayaa sabab u noqon karta qofka inuu daalo, gaajoodo ama uu oomo inta uu maalinki sooman yahay.
Fadi Cabbaas oo ah nin cunnooyinka ku takhasusay oo u dhashay dalka Suuriya wuxuu ku talinayaa iney dadku talooyinkan raacaan si soonka uu ugu noqdo mid fudud, tabar la’aanna ay kala kulmin caafimaad buuxana u horseeda.
“Xilliga suxuurta waa inaad isticmaashaa cunnooyinka 70% biyo ka kooban cunnooyinka aad cuneysidna yaree wakhtina u dhaxeysii (ugu yaraan shan daqiiqo), cuntada aad ku suxuuraneysidna haddii aad heli karto waa iney kuu wehiliyaan Khudaar sida Qajaarka, Salar iyo Kaabej) cuntooyin kala nooca ahna ha isku darin. Cuntada aad ku suxuuraneysidna waa iney ahaato mid aan cusbo iyo dufan badan laheen, maadaamaa ay jirka ku qasbayaan inuu biyo badan uu maalinki u baahdo taasina ay keento saacadaha soonka ugu horreeyaba inuu qofku oomo”, ayuu yiri Cabbas.
Fadi Cabbaas waa khabiir ku takhasusay cunnooyinka
Wuxuuna intaa ku daray: “Sokortna waa inaan la isticmaalin ama aad loo yareyaa waxaana ka sii fiican in la cuno khudaarta sokorta dabiiciga ah laga helo sida (Qaraha, Strawberries iyo Liin Macaanta) ama koob sharaab dabiici ah, suxurtaada waxa ugu dambeeyana ha noqdo biya nadiif ah oo la cabbo.”
Hay’adda Caafimaadka Qaranka ee UK waxay iyaduna ku talineysaa xilliga suxuurta inaan qaxwa iyo shaah la cabbin sababta oo ah waxaa ku jira maaddada Caffeine oo sababeysa inuu qofka aad u kaadiyo kaddibna qofka ay ku keento cadaadis dhinaca kaadi haysta maadaamaa biya jirka ka baxa mooyee wax soo galaya jirin.
Jirka marka uu dareeraha ku yaraadana qofka sooman waxaa la soo dersaya caafimaad darro sida madax xanuun, dhiigga oo hoos u dhaca, dhibaatooyin dhinaca kaliyaha iyo kuwo kale.
Sideen uga gaashaaman karnaa dhibaatooyinka sababa daalka iyo caajiska afurka kaddib?
Qorshaha bisha Ramadhaan ee xagga cunnooyinka inkasta oo uu ku xiran yahay awoodda dhaqaale ee qoyska haddana waxay dadku intooda badan ay maalin walba cunaan cunnooyin kala jaadjaad ah iyada oo dadka qaar ay cunnooyinka kala nooca ah la’aantood ay xilliga afurka farxad heleynin. Balse qofka cuntooyinka kala nooca ah ku afura ama ku suxuurta saacadaha ugu horreeya soonkaba wuxuu dareemayaa gaajo aad u daran.
Cuntada badanna sideedaba waxay keentaa calool xanuun, dibbir, caajis, hurdo iwm. Dadka qaarkana waxay ku keenaan Dhiigga ama Sokorta iney ku kacdo.
“Qofkasta oo sooman maalinta soonkiisa ugu horreysa dhibaato ayuu kala kulmaa maxaa yeelay jirka wuxuu tabayaa cunnooyinki dufanka lahaa uu u bartay oo uu tamarta ugu badan ka heli jiray” ayuu yiri cabbaas.
Cabbaas wuxuu leeyahay afrurka waa in seddex qaybood loo qaybiyo oo ay u dhaxeyso ugu yaraan 6 daqiiqo labada cunto dhexdoodaba gaar ahaanna qaacidadaasi waxay fiican tahay xilliga suxuurta ayuu yiri.
Sababtana wuxuu ku sheegay maskaxda amarka ay caloosha ku siineyso iney wax shiiddoo maadaamaa ay ku qaadaneysaa 18 daqiiqo.
Xilliga afurkana waa in laga billaabo biyo seddex jeerna la kabbaadaa oo aan qurqurin qofka oo fadhiyo. 6 daqiiqo kaddibna waxaad ku billaabeysaa wax sokor leh si jirka uu u helo sokorti uu maalinti oo dhan u u baahnaa tamarta jirka uu u baahan yahayna looga dhaliyo waxyaabaha sokorta laga helayana waa iney ahaadaan cunnooyin dabiici ah sida timirta iyo khudaarta cusub.
Waxaa laguugula talinayaa inaad cuntid hal ama laba cunto oo ay ku jiraan Protein iyo Carbohydrate
6 daqiiqo kaddibna waxaa qofka lagula talinayaa inuu ku xigsiiyaa khudaarta cagaara sida salarka maadaamaa jirka uu ka helayo Fiitaaminno isla markaana calool fadhiga uu dawo yahay.
Khudaarta kaddibna cuntooyinka uu qofka sooman isticmaali karo waxay khubaradu ku sheegeen iney ka mid yihiin sida baradhada, bariiska, baastada, rootiga ama wax kasta carbohydrate laga heli karo oo ay la socdaan cuntooyiinka Protein laga helo sida hilibka, ukunta iwm. Cuntooyinkaasi calalintoodana qofka ay ku qaadataa haddii ay jilicsan yihiin 30 ilbiriqsi haddi ay adag yihiinn 60 ilbiriqsi si ay dheefshiidka u caawiso.
Cuntada marka aad cunto saacad inta ay ka soo wareegin fadlan ha cabin biyo wax ka badan laba koob oo biya ah. Marka aad afurtid kaddibna wa inaad saacad ama saacad iyo barba aad biya cabtaa oo aadan sugin jirkaaga inta uu kaaga sheegayo inaad ooman tahay.
Dumarku ragga gaajada ma uga adkeysi badan yihiin?
Dadka xirfadaha kala duduwan noolasha ku maareeya sida ay u qorsheystaan Ramdhaan wey ku kala duwan yihiin maadaamaa ay markoodi horaba ay ku kala duwanaayeen hab noolaleedkooda, wax cunkooda iyo dabeecadahooda intaba.
“Aniga bisha Ramadhaan oo dhan waxaan noqdaa qof dulqaad badan oo niyad saafi ah, hase yeeshee duhurrada marka la gaaro dabeecaddeyda wey isbedeshaa oo waan caroodaa oo isma xakameyn shaqaalaha aan la shaqeeya hxataa waa isku dhacnaa, haddana markiba waan isdajiyaa saaxibbadeyna waan raalli geliyaa” ayuu yiri Saciid Yuusuf oo ka shaqeeya dhismaha oo ka soo jeeda dalka Suuriya.
Maalmaha ugu horreeya bisha Ramdhaan gaaja ayaa aad ii qabato ilaa aan mararka qar u adkeysan waayo balse toddobaad kaddib waan la qabsadaa oo caadi ayaan noqdaa” ayuu yiri Cusmaan Yuusuf.
“Dumarka ragga wey kaga adkeysi badan yihiin gaajada maxaa yeelay dufanka jirka dumarka ku jira ayaa ka badan kan ragga marka dufanka jirkooda ku badan ayaa ka caawinaya iney gaajada u adkeystaan sida oo kalan ragga murqaha ayaa ku badan oo tamarta jirka ugu badan isticmaala halka ay dumarka murqaha ku yar yihiin” ayuu yiri Maxamed Faa’id oo cunnooyinka ku takhasusay.
Esrogyn-ka wuxuu dumarka ka caawiyaa in gaajada la qabsadaan oo ay jawi deggan ku sugnaadaan
Dumarka shaqeeya iyo nooca dhiiggooda
“Dumarka shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynin tamarta jirkooda ee ay gubaan wey ku kala geddisan yihiin inkasta oo ay ku xiran tahay hadba xaaladda noolaleed ee ay ku sugan yihiin”, ayuu yiri Faa’id.
Wuxuu aaminsan yahay qofka waxa uu cuno iyo iney dareenkiisa saameyn ku yeelanayaan. Xilliga ay haweeneyda gaaja dareentana inta ay raggu dareemaan in la mid ah ayey dareemayaan.
Nooca dhiigga qofkana wuxuu xiriir la leeyahay sida uu ugu adkeysan karo gaajada iyo dulqaadka uu soonka u yeelan karo.
Faa’id oo ku takhasusay cunnooyinka wuxuu sheegay dadka dhiiggooda uu yahay ‘O’ iney gaajada aad ugu adkeystaan xagga adkeysigana waxaa ku xiga dadka dhiiggooda uu yahay ‘A’ ama ‘AB’, balse dadka nooca dhiiggooda uu yahay ‘B’ ayaa ah kuwa ugu adkeysiga yar gaajada iyo soonkaba guud ahaan.
Previous articleSomaliland oo Deeq Waxbarasho ka heshay Itoobiya+Tirada & Shuruudaha laga rabo Muwaadinka Danaynaya Fursadaa
Next articleLarry Edward André, Jr: Waa kuma Safiirka cusub ee Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya?